China eKhethekileyo Pallet Racking umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
Uhlobo lweRacking: I-pallet ekhethiweyo yokupakisha
Izinto: Q235/Q355Intsimbi Isatifikethi CE, ISO
Ubungakanani: eyenziwe ngokwezifiso Iyalayisha: 2000-4000kg kwinqanaba ngalinye
Isicelo: ngeentlobo ngeentlobo zemithwalo kunye nebhetshi enkulu
Igcinwe nge-pallet ngokufanelekileyo, ihambelana ngokufanelekileyo ne-forklift okanye ifike kwilori yokulayisha kunye nokukhulula kwaye iphucula kakhulu ukusebenza kakuhle.
Yakhiwe ngezinto ezilula, i-pallet rack ekhethiweyo inokufakwa ngokukhawuleza.Ikwaxhasa ukudilizwa kunye nokusiwa kwindawo entsha ngokwemfuno yoqobo yokugcina.
I-pallet rack ekhethiweyo yenzelwe ngokwesayizi eyahlukeneyo kunye nobunzima.Inokuguquguquka okuphezulu kwiindidi ezahlukeneyo zepalethi.
I-pallet rack ekhethiweyo luhlobo lwe-racking olubiza kakhulu ngenxa yesakhiwo sayo esilula.Ngesakhelo kunye nomqadi, iyafumaneka ukuze isebenze.Kukho nezinye izincedisi ezilungelelaniswe kunye ne-racking kakuhle, ukuqonda ukusebenza okungcono kokugcinwa.
◆Ukufikelela ngokupheleleyo kwimithwalo
I-pallet rack ekhethiweyo iyakwazi ukuqinisekisa ukufikelela kwi-100% kwi-pallet.Ke, akukho mfuneko ingqongqo yeentlobo zempahla yokugcina impahla, kwaye ayinamda kulandelelwano lwangaphakathi noluphumayo.
Isakhelo senziwe ngokuthe tye, i-H ibracing, i-D yokuqhobosha kunye neplate yeenyawo.Sisebenzisa izixhobo zentsimbi ezikumgangatho ophezulu, kunye nomgca wokuvelisa othe tye othe tye wangaphandle okwaziyo ukuqinisekisa ukuba iiracks zethu zichanekile, ukufana okuhle kunye nokusebenza ngokukhawuleza kwemveliso.
Umtha uhlelwa ngokwe: umqadi webhokisi, umqadi omnye, umqadi wenyathelo.
Umqadi wenyathelo, usetyenziswa ngokubanzi ngepaneli yentsimbi okanye ipaneli yomthi.
Ibhokisi yebhokisi kunye nentsimbi enye, iyakwazi ukuxhasa i-pallet ngokwayo.Kukho izincedisi ezifana ne-pallet yenkxaso kunye ne-mesh yocingo, ehambelana nomqadi webhokisi kunye ne-beam enye kakuhle kakhulu ukuphucula ukhuseleko lokusebenza kunye nokugcinwa.
◆Uluhlu olubanzi lwezincedisi ozikhethelayo
Ngaphambili: Iintlobo ezininzi zeMezzanine
Okulandelayo: T-Post Shelving
Asrs Ugcino, I-Four Way Shuttle, Umhambisi, IShuttle yomntwana, Qhuba kwi Racking, ICarton Live,